Dib-u-eegis Maalinta 14 Day Keto
Home » Keto » Dib-u-eegista 14 Day Keto
The 14 Day Keto Challenge waa qorshe cusub oo cunto ah oo uu abuuray qoraaga ugu wanaagsan iibiyaha iyo nafaqeeyaha CISSN ee Joel Marion. Waa mid ka mid ah qorshooyinka cuntada ee ugu haboon ketogenic oo aad ka heli karto internetka. Qorshahan cusub ee cuntada ayaa dhaqdhaqaajin doona jidhkaaga isla markaana wuxuu u rogaa mashiinka gubanaya subaxnimada 2. Qorshahan cusubi wuxuu yareynayaa qaadashada karbohidraatka wuxuuna kordhiyaa heerka dufanka saaxiibtinimo ee jirka qofka. Qorshahan cusub waxaad ka baran doontaa koox gaar ah oo ah "dufanka super" iyo sida dufanku kaa caawin doono in aad dusha ka saarto miisaanka xad-dhaafka ah ee yar yar ee 14. Qaar ka mid ah kuwaan la yiraahdo "super fat" waxaa ka mid ah kuwa ugu roon sida hilibka doofaarka, subagga, hilibka cas ee dufanka leh, iyo jaallaha ukunta. Xiisadan cusub ee 14 ma laha wax la sameeyo Atkins waana mid gebi ahaanba ka duwan qorshaha cuntada ketogenic ee caadiga ah.
Cuntada loo yaqaan 'keto diet' ayaa keenta marxaladda loo yaqaan 'ketosis'. Ketosis waa xaalad dheef-shiid kiimikaad ah oo lagu garto heerarka sare ee ketone ee unugyada jirka. Adoo si weyn u yareynaya qaadashada gawaaridaada, iyo inaad beddesho gawaarida noocyada saxda ah ee dufanka saxda ah, cuntooyinka keto soo saara ayaa jidhkaaga ku qasbi doona inay ketones u sameeyaan shidaalka taas oo markaa awood u siinaysa jirkaaga in uu si wanaagsan u gubo baruurta tamarta. Miyuu xaq u leeyahay? Waa hagaag waxaa jira waxyeelo weyn ... oo waa wax ay dadku bilaabaan inay ka walwalaan kahor intaan bilaabin qorshaha cuntada keto. Waxa la yidhaahdaa ifilada Keto.
Waa maxay Keto Flu?
Hargabka "keto" waa erey loo isticmaalo tilmaamidda calaamadaha hargabka ee la xidhiidha bilawga qorshaha cuntooyinka ee ketogenic oo hooseeya. Marka la eego hargabka keto, qofku wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin culus oo ay ka mid yihiin hurdo, caloosha, arrimaha dheef-shiidka, madax-xanuun, daal, muruqyada muruqyada, iyo macdanta. Iyada oo la 14 Day Keto Challenge uma baahnid inaad ka walwasho sidii wax looga qaban lahaa khatarta ku jirta xanuunka Keto. Qalab kale oo cunto keto ah ayaa ah in mararka qaarkood ay qaadan karto illaa bil qof si uu u galo "run" ketosis. Xitaa haddii sababo badan oo jidhkaagu u awoodo inuu galo ketosis wiigii, dhibaatada ugu weyn ee ka jirta hargabka keto waa in qorshaha keto ee caadiga ah uusan aheyn mid dabacsan oo aan macquul ahayn inuu ku jiro xaalad ketosis ah oo muddo dheer ah. Marka laga reebo inaysan ahayn mid macquul ah, xaalad ah ketosis joogta ahi maahan mid caafimaad qaba mudo dheer.
14 Day Qorshaha Cuntada ee Keto Challenge waa xalka ugu fiican ee cunto keto ah. Jidhkaaga ayaa awood u leh in uu soo saaro ketones, oo aanad dhab ahaantii kugu dhici doonin ketosis. Haa, waad maqashay in ay sax tahay ... weli waad heli doontaa ALL ee faa'iidooyinka cajiibka ah ee jidhkaaga soo saaraya ketones LA'AAN dhab ahaantii ku jiraa ketosis run ah.
Qorshaha cuntada keto ee dhaqameed, waxaad metabolismisku bilaabi kartaa inuu hoos u dhaco maalmaha 7-10 sababtoo ah la'aanta gulukoosta ee aan cunin carabyada. Tani waxay markaa keeni doontaa dhibaatooyin hoormoonada ka masuul ah gubista dufanka. Xalka dhibaatadani waxa weeye cunista "keto carbs" waqtiyada ku habboon. Tani waxay si faahfaahsan uga hadashaa Qorshaha Cuntada ee 14 Day Keto Challenge! Qorshahan cuntada, waxaad ogaan doontaa xaqiiqda ku saabsan sida "keto gunteeda" ay u dheelitirto oo hormariso hormoonnadaada si ammaan ah oo waxtar leh u gubi dufanka.
FAA'IIDOOYINKA ISTICMAALKA 14 MAALINTA KETO:
Waxaad ubaahnaan doontaa inaad cunto karbohidratka keto ku salaysan si aad u ilaaliso una hagaajiso dheef-shiidkaaga. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka tartanka kani 14 ee maanta kakooban waxaa ka mid ah:
- Jirka qofka isticmaala ayaa si fiican u gubi doona gulukooska xad-dhaafka ah ee laga helo carbohydrateska. Tani waxay u oggolaanaysaa beerka in uu bilaabo geeddi-socodka soo saarida ketones mar labaad.
- Hooyooyinka dufanka caloosha aka aka heerarka cortisol ayaa bilaabi doona inay hoos u dhacaan.
- Qanjiraha qanjirada si habboon loo nidaamiyo (tani waxay ka masuul tahay dheef-shiid kiimikaadkaaga)
- Heerarka korantada ee tamarta
- Lagama maarmaanka aheyn in aanad xoogga saarin
- Horumarinta heerarka insulin taas oo horseedi karta heerarka dufanka ee jirka
- Nidaamka cuntada ee keto ku salaysan ma laha hargab keto kaas oo ah dadka isticmaala cuntada keto ee caadiga ah. Waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato isbeddelka cusub ee jirkaaga adiga oo aan wax dhibaato ah u lahayn "keto waxyeelo"
- Cunnadu waxay u oggolaataa jirka inuu beddelo dufanka ku keydsan tamarta. Daadinta dufanku qasab maaha inay maraan geedi socodka ketosis.
- Maalinta 14 ketiga cuntada ayaa kuu ogolaanaya inaad cuntid oo aad ku raaxaysato raashinka aad jeceshahay. Uma baahnid inaad iska xakameyso cuntooyinka karbarka sare marka jirkaaga uu ku jiro marxaladda wax soo saarka ketone.
MAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KA HELI KARO XIRIIRKA KNOUMAHA KEESHE:
Qorshahan 14 maalintaan wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan mudo gaaban. Uma baahnid inaad xirto cuntada keto ilaa noloshooda. Qaar ka mid ah sababaha aad u go'aansan karto in aad u isticmaasho cuntokan si natiijo fiican leh oo dhakhso lehna waa:
- Waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato dhammaan ilaha borootiga dufan ee aad jeceshahay illaa intaad ka qaadato jeexitaanka saxda ah ee hilibka.
- Waxaad ku raaxeysan kartaa cuntada ugu fiican ee aad u jeceshahay ilaa intaad ku jirto "keto carbs". Tan waxaa ka mid ah midhihii cunista iyo sidoo kale! Adiga, si kastaba ha ahaatee waxaad u baahnaan doontaa inaad ogaato wakhtiga saxda ah ee aad cuni karto cuntadan si aad u hagaajisid kartida gubashadaada taasoo ah arrin koorsadani si buuxda u dabooleyso.
- Qorshahan dayactirka ah ee 14 ku salaysan ma laha saameyno sii dheeraaday oo xaddidaya awoodaada. Tani way ka duwan tahay cuntooyinka keto ee caadiga ah taas oo leh waxyeello badan.
- Qorshahani wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho murqo caato ah
- Waxaad si deg deg ah u soo dejisan kartaa hannaankaas iyadoo loo heli karo qaabka PDF si aad u bilowdo isla markiiba
- Waxaad ku raaxeysan kartaa cabitaanka khamriga ee aad jeceshahay adiga oo ka fogow aalkolada sii kordhiya kaydinta dufanka leh kuna jirta sonkor badan. Qorshaha maalinta 14 wuxuu muujinayaa cabitaanka khamriga ee aad cabi karto
- Si fudud loo isticmaali karo sababtoo ah "habka loola beegsado"
- Waxaad ku raaxeysan kartaa daawooyinka aad ugu jeceshahay hal mar toddobaadkii adiga oo aan helin dufanka marka aad si buuxda u fahamsan tahay sida loola beegsaday habka keto loo shaqeeyo
- Qorshahani waa mid sahlan in la raaco muddada dheer waxaana ka mid ah macdanta, nafaqooyinka, iyo walxaha ka hortagga cilladaha caadiga ah ee caadiga ah ee cuntada keto
- Haddii aanad ku qanacsanayn habkan 14 Day Challenge ee yimaada kaas oo buuxa maalinta 60 ee dammaanad dammaanad ah si aanad u lahayn wax lumin!
Waxaan u maleyneynaa in qorshahan uu yahay mid aad u wanaagsan, waana xulashada ugu fiican ee jirkaaga muddada dheer. Haddii aad qorsheyneysey inaad tagto keto markasta, hubso inaad ka hubi 14 Day Keto Challenge ugu horeyn sababtoo ah waxay la imaanaysaa halis yar waxayna wali sugeysaa natiijooyinka! Haddii aad maanta dalbato waxaad xitaa heli doontaa 4 hadiyado lacag ah oo bilaash ah amarkaaga! Waxaad heli doontaa eBooks lacag ah 4 oo ay ka mid yihiin hage jimicsi, cunto fudud iyo khadadka, hagaha xaashida xaashida, iyo qorshaha soonka soonka.